Puntland iyo 2017 | allsanaag
Puntland iyo 2017
Mudug Iyo Nugaal miyeey ka argagexeen Reer Waqooyiga Muqdisho ku shiraya.
Dhowrkii bilood ee ugu danbaysay sanadkan aynu ku jirno, warbaahinta Soomaalidu waxay qorayeen kuraastii Xildhibaanada Aqalka sare ee Gobolada Sool iyo sanaag waxa la geeyey “Waqooyiga Soomaliya. Ma jirin siyaasi ka soo jeeday gobolada Nugaal iyo Mudug oo ka hadlay ama Warbaahinta wada wadata magaca Puntland oo wax ka qortay “haddi reer Sool iyo Sanaag ahaayeen Puntland waa maxay sababta xildhibaanadooda loo geeyey waqooyi. Taa waxa sii dheer madashii Xildhibaanada Sool iyo Sanaag lagu go’aamiyey in la geeyo Waqooyi waxa fadhiyey oo raali ka ahaa in halkaa la geeyo Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Gaas iyo Ra’isawasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid oo ka soo wada jeeda Nugaal iyo Mudug.
Bulshaddii Nugaal iyo Mudug ee ka war haysay , la socday, ka aamustay raalina ka ahayd in kuraastii Sool iyo Sanaag la geeyo waqooyiga Soomaaliya, in ay maanta ku argagaxaan sawirka Ilkojiir, Camey iyo Reer waqooyi oo wax ku wada qaybsanaya Muqdisho , waa is yeel yeel iyo khalad laga fahmay Puntlandtii la wada dhistay. Haddi aad shalay raali ka ahayd in kuraasta Sool iyo sanaag la geeyo waqooyi ma waxa doonaysay in sidii Laascaanood looga samro Kuraasta Aqalka sare. Haddaan la wada hadlayn.
Ugu danbayntii maanta Madaxweynihii Puntland Gaas wuxuu ku sugan yahay magaalada Muqdisho, isaga oo u ololeenaya siddi Xasan Culusoow dib loogu soo dooran lahaa . Halka madaxweyne ku xigeenkiisuna Camey isaguna ku sugan yahay magaalada Muqdisho. isaga oo u ololeenaya siddi reer waqooyi xildhibaano badan u heli lahaayeem. Waxa kale Muqdisho ku sugan Wasiiro iyo Xildhibaano ka mid ah Puntland oo iyaguna u ololeenaya arimo kale oo lid ku ah Puntland. Hadaba dhulgariirka siyaasadeed ee socda ma u diyaar garoobeen wiilasha cidlada ka argagaxaya maanata ee ka soo jeeda Nugaal iyo Mudug
← Shariif Sakiin iyo Todobaatankiisa Xildhibaan Trump official Paladino under fire over crude Obama remarks →